Dear Comrade (2019) | MM Movie Store
၂၀၁၉ထှကျ တလေဂူး (telugu)အခဈြ၊အကျရှငျ ဇာတျလမျးကောငျးလေး အကွညျထှကျလာလို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။မငျးသားနဲ့မငျးသမီးကတော့ Geetha Govindam က မငျးသား Vijay Devarakonda နဲ့မငျးသမီး Rashmika Mandannaပါပဲ။
(မငျးသမီးကတော့ ယှနျးဝတီလှငျမိုးပါပဲ)အညှနျး.. ဇာတျကားနာမညျကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး ခဈြလှစှာသော သှေးသောကျရဲဘျောတဲ့။“သှေးသောကျရဲဘျောဆိုတာ ကိုယျ့လုပျရပျတှကေို ဝနျးရံပေးပွီး တဈဖကျတဈလမျးက ကူညီပေးတဲ့လူ”ပဲမဟုတျလား။
ဇာတျလမျးစစခငျြးမှာဘျောဘီဆိုတဲ့ လူငယျတဈယောကျ မူးရူးသောကျစားပွီး မကျြရညျတှနေဲ့ လီလီဆီ ဖုနျးချေါဖို့ အတငျးကွိုးစားနတေယျ။လီလီ… တဈခြိနျက သူ့ဘဝထဲ လှလှပပ ဝငျရောကျခိုနားခဲ့ပွီး ဝမျးနညျးမှုတှပေေးပွီးမှ ထှကျခှာသှားခဲ့သူ။လီလီဟာ ဘာကွောငျ့မြား ဒီလို ထှကျသှားရကျတာလဲ။
ဘျောဘီဟာ စိတျလိုကျမာနျပါ လုပျတတျတဲ့လူတဈယောကျ။ကြောငျးမှာဆိုရငျလညျး “ကြောငျးသားသမဂ်ဂ” ဆိုတဲ့ နာမညျတဈခုနဲ့ ထငျရာစိုငျးတဲ့ကောငျလို့ အမြားမွငျကွတယျ။ခဏခဏ ရနျတှဖွေဈတယျ။ သောကျစားတယျ။ဒါပမေဲ့ မိနျးကလေးတှကေို ရိုသမှေုထားတတျတာလညျး သူ့စရိုကျပဲ။
“သူ ပွောခဲ့တဲ့ စကားတှထေကျ ကြှနျတျော ဘာမှ ခှနျးတုနျ့မပွနျနိုငျခဲ့တာကို ပိုရငျနာရပါတယျ” တဲ့။လီလီမှာ သူ့ကွောငျ့ တဈစုံတဈခု ဖွဈခဲ့ရတယျဆိုတာတော့ သူ မသိခဲ့ပေ။လီလီနဲ့ ပွနျတှမှေ့ာလား….။ လီလီ ဘာဖွဈခဲ့တာလဲ။ ဘျောဘီနဲ့ ရနျဖကျ ဘူလီရဲ့ ညီတို့ ပွဿနာကော…. ပွီးခဲ့ပွီလား….။
“ကြှနျတျောသူ့ကို ဒီအခြိနျမှာ နောကျဆုံး တှခေဲ့ရတာပါ”အခဈြစဈလို့ ပွောလိုကျရငျ ထားခဲ့တဲ့ အခဈြဦးကိုပဲ ပွေးမွငျတတျကွတာ လူတိုငျးဖွဈမှာပါ။ထားခဲ့တဲ့ သူကိုတော့ ဘယျလို မမေ့လဲ။အခဈြကွောငျ့လညျး ရူးသှပျဖူး၊ အခဈြကွောငျ့လညျးငိုကွှေးဖူး၊ အခဈြကွောငျ့ပဲ ပြျောရှငျဖူးတယျ။————————————————–
နောကျကသြှားခဲ့တာ တောငျးပနျပါတယျ။ မအားမလပျလို့ကွာနခေဲ့တာပါ။ဇာတျကားကောငျးတှကေို အခြောမောဆုံး ကွညျ့ရှုကွစဖေို့ သခြောစဈဆေးဖို့လညျး အခြိနျပေးရသေးပမေဲ့ ဒီနမှေ့ာတော့ တောငျးဆိုထားကွတဲ့လူတှေ ပြျောရှငျနိုငျပါပွီ။
၂၀၁၉ထွက် တေလဂူး (telugu)အချစ်၊အက်ရှင် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေး အကြည်ထွက်လာလို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကတော့ Geetha Govindam က မင်းသား Vijay Devarakonda နဲ့မင်းသမီး Rashmika Mandannaပါပဲ။
(မင်းသမီးကတော့ ယွန်းဝတီလွှင်မိုးပါပဲ)အညွန်း.. ဇာတ်ကားနာမည်ကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ချစ်လှစွာသော သွေးသောက်ရဲဘော်တဲ့။“သွေးသောက်ရဲဘော်ဆိုတာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေကို ဝန်းရံပေးပြီး တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးတဲ့လူ”ပဲမဟုတ်လား။
ဇာတ်လမ်းစစချင်းမှာဘော်ဘီဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် မူးရူးသောက်စားပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ လီလီဆီ ဖုန်းခေါ်ဖို့ အတင်းကြိုးစားနေတယ်။လီလီ… တစ်ချိန်က သူ့ဘဝထဲ လှလှပပ ဝင်ရောက်ခိုနားခဲ့ပြီး ဝမ်းနည်းမှုတွေပေးပြီးမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သူ။လီလီဟာ ဘာကြောင့်များ ဒီလို ထွက်သွားရက်တာလဲ။
ဘော်ဘီဟာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်။ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်း “ကျောင်းသားသမဂ္ဂ” ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခုနဲ့ ထင်ရာစိုင်းတဲ့ကောင်လို့ အများမြင်ကြတယ်။ခဏခဏ ရန်တွေဖြစ်တယ်။ သောက်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ရိုသေမှုထားတတ်တာလည်း သူ့စရိုက်ပဲ။
“သူ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေထက် ကျွန်တော် ဘာမှ ခွန်းတုန့်မပြန်နိုင်ခဲ့တာကို ပိုရင်နာရပါတယ်” တဲ့။လီလီမှာ သူ့ကြောင့် တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတော့ သူ မသိခဲ့ပေ။လီလီနဲ့ ပြန်တွေ့မှာလား….။ လီလီ ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ဘော်ဘီနဲ့ ရန်ဖက် ဘူလီရဲ့ ညီတို့ ပြဿနာကော…. ပြီးခဲ့ပြီလား….။
“ကျွန်တော်သူ့ကို ဒီအချိန်မှာ နောက်ဆုံး တွေ့ခဲ့ရတာပါ”အချစ်စစ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ထားခဲ့တဲ့ အချစ်ဦးကိုပဲ ပြေးမြင်တတ်ကြတာ လူတိုင်းဖြစ်မှာပါ။ထားခဲ့တဲ့ သူကိုတော့ ဘယ်လို မေ့မလဲ။အချစ်ကြောင့်လည်း ရူးသွပ်ဖူး၊ အချစ်ကြောင့်လည်းငိုကြွေးဖူး၊ အချစ်ကြောင့်ပဲ ပျော်ရွှင်ဖူးတယ်။————————————————–
နောက်ကျသွားခဲ့တာ တောင်းပန်ပါတယ်။ မအားမလပ်လို့ကြာနေခဲ့တာပါ။ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို အချောမောဆုံး ကြည့်ရှုကြစေဖို့ သေချာစစ်ဆေးဖို့လည်း အချိန်ပေးရသေးပေမဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ တောင်းဆိုထားကြတဲ့လူတွေ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါပြီ။